Ogaden News Agency (ONA) – SHIRKII OYSU EE NORTH AMERICA IYO MAALINTII 3AAD
SHIRKII OYSU EE NORTH AMERICA IYO MAALINTII 3AAD
Posted by ONA Admin	/ July 25, 2011
Shir waynihii ururka midowga dhalinyarada & ardayda Ogadenia (OYSU) oo bilowday maalintii jimcaha ahayd ee July 22 2011 ayaa wuxuu kasocdaa maalintii sadexaad Magaalada Denver ee gobolka Colorado. Waxaa maalintii jimcaha ahayd kusoo qul qulayay gobolka Colorado, gaar ahaan Magalada Denver dhamaan urur waynaha OYSU ee waqooyiga America meelkesta oo ay kajiran dhamaan waqooyiga America sida; Canada & Maraykanka iyadoo ay ka kala yemaadeen in kabadan 20 branch (qaybood) oo uu xooghaye u yahay Mudane Maxamuud Cumar (Mirqaan) taas oo ay wehelinayeen laba xubin oo kamid aha gudiga fulinta OYSU ee caalamka Marwo, Najma Ahmed oo kasoo kicitantay wadanka Denmark, & Marwo Rahma oo kaso kicitintay Canada shirkan ayaa waxaa u bilawday maalinkii jumcaha ahayd is barasho dheer & warbixino ay kala qaadanayeen sida uu ahaa safaradii kala duwanaa ee ay soo galeen iyadoo ay dhalinyarada ka muuqatay farxad aad & aad u badan ayaa ku kala war qaatay halkaas.
Maalintii shalay ee ay taarikhdu ahayd 07/23/2011 oo uu shirwaynuhu galay maalinkii labaad ayaa waxaa isu soo baxay dhamaan shacab waynaha Ogadenia & walaalaha soomaaliyeed ee kunool gobolka Colorado iyagoo runtii aad usugi la’aa shir waynahan ay dhalinyaradu isugu imanayeen ee ay sanad kasta ku kala war qaataan hal mar. Shirkan oo ay goob joog ka ahaa, masuuliyiin sar sare oo kamid aha madaxda ugu saraysa JWXO oo uu hormuud u ahaa Hoganka arimaha dibada ee JWXO mundane C/ rahmaan Sheekh Mahdi oo bilihii udanbeeyay ku hawlanaa kormeer sare oo uu kusoo maray dhamaan gobolada kala duwan ee uu ka koobanyahay, maraykanku. joo
Madaxda kale ee shirkaa lagu marti qaaday ayaa waxaa kamid ahaa Mudane Ahmed Majeerteen iyo Mudane Mahamud Nuur iyo Mudane Ahmed Ali Yusuf.
Madasha shirka oo runtii lasoo buux dhaafiyay ayaa waxaa uu ku bilowday jawi aad u fiican aya waxay ay kujirto hawl karnimo gobolkasta ugasoo war bixiyay, waxyaabihii usoo qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay (action plan) taas oo warbixinada ka muuqatay inay guul ugu soo dhamaadeen. Waxaa Iyaduna meesha ku jirtay oo waftiga lasugayay halkaas wacdaro Kadhigtay sidii loogu bartayba xidigaha OYSU, MN oo kaso jeediyay xog sheeg faneed aad ay uga heleen dad waynihii kasoo qayb galay shir sanadeedka OYSU, North America. Shirkaasoo kusoo dhamaday farxad, guul & rayn rayn, ayaa maalintii axada ahayd ee taarikhdu ahayd 24/7/2011 kusoo gaba gaboobay Magalada Denver. Dhalinyarada Midawga & Ardayda Ogadenia, oo ku kala qaybsadaday qorshihii (agenda) sanadkan soo socda hadii alle yiraahdo kunasoo jeediyeen sinimaaro wax ku ool aha & aqoon is waydaarsi. Goobta shirka oo ay dhallinyaraada kamuuqatay wajigooda shucuur ay ku dheehantahay wadaninimo, farxad ad ubadan iyagoo hal ku Dhagoodu ahaa
Erayooyinkii aad loo dhacay ee madasha laga qaadey waxaa kamid ahaa tixdan
OYSU, OYSU OYSU, MIDIGTA IS QABSADA
gacmahana is wada qabsaday, dhaarna kuwada maray inay ciida dhiciyaan.
MINTID, MIDNIMO, ISKUTASHI.